मूल खबर | Samaj Khabar
कैदीबन्दीलाई ४३ इन्चको टिभी हेर्ने सुविधा !
लमजुङ । लमजुङ । जिल्ला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीले ४३ इन्चको एलइडीसहित दुई थान टेलिभिजन पाएका छन् । कारगारभित्...
बङ्लादेशमा डुङगा दुर्घटना हुदाँ ८ रोहिङ्ग्या शरणार्थीको मृत्यु
ढाका । म्यानमारसँगको दक्षिणपुर्वी सिमानामा पर्ने बङ्गलादेशको बङ्गालमा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका र...
कात्तिक ५ गतेदेखि ठमेलमा गाडी चलाउन नपाईने
काठमाडौं । प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा रहेको ठमेललाई कात्तिक ५ गतेदेखि सवारी साधनमुक्त क्षेत्र बनाइने भएको...
‘वाम एकताले काँग्रेसलाई कुनै असर पर्दैन् ‘
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले वाम एकता र चुनावी तालमेलले काँग्रेसलाई कुनै असर नपार्ने बताउनुभए...
राप्रपाको केन्द्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावलाई ध्यानमा राख...
सोमालिया विस्फोट: मृत्यु हुनेको संख्या २३० पुग्यो
मोगादिसु । सोमालियाको राजधानीमा रहेको मोगादिसु सफारी होटेलमा शनिबार भएको विस्फोटमा परी ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या...
वर्षाका कारण नेपाल र हङकङबीचको खेल फेरि प्रभावित
हङकङ । वर्षाका कारण नेपाल र हङकङकबीचको खेल प्रभावित भएको छ। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग ९डब्लुसिएल० च्याम्पियनसिप...
लमजुङ । लमजुङ । जिल्ला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीले ४३ इन्चको एलइडीसहित दुई थान टेलिभिजन पाएका छन् । कारगारभित्र रहेका पुरुष तथा महिला कैदी तथा बन्दीलाई छुट्टाछुट्टै दुई थान टेलिभिजन प्रदान ग...	Read more
ढाका । म्यानमारसँगको दक्षिणपुर्वी सिमानामा पर्ने बङ्गलादेशको बङ्गालमा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका रोहिङ्ग्या मध्ये अहिले सम्म आठ जनाको शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । स्थानीय प्रहर...	Read more
काठमाडौं । प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा रहेको ठमेललाई कात्तिक ५ गतेदेखि सवारी साधनमुक्त क्षेत्र बनाइने भएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र ठमेल विकास परिषद्ले आयोजना गरेको पत्रकार...	Read more
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले वाम एकता र चुनावी तालमेलले काँग्रेसलाई कुनै असर नपार्ने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो– “काँग्रेस राणाका विरुद्ध एक्लै लड्यो, पञ्चायतसँग एक्लै ल...	Read more
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावलाई ध्यानमा राखेर ‘केन्द्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम’ सोमबारदेखि शुरु गरेको छ । पार्टीको...	Read more
मोगादिसु । सोमालियाको राजधानीमा रहेको मोगादिसु सफारी होटेलमा शनिबार भएको विस्फोटमा परी ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या २३० पुगेको छ। अमिन एम्बुलेन्स सेवाका निर्देशक अव्दुलकदिर अव्दिरअहमान अदेमले अहि...	Read more
हङकङ । वर्षाका कारण नेपाल र हङकङकबीचको खेल प्रभावित भएको छ। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग ९डब्लुसिएल० च्याम्पियनसिपको छैटौं चरणको दोस्रो खेलमा नेपालले सोमबार हङकङसँग प्रतिस्पर्धा हुने तय भएपनि वर...	Read more
जाँदा जाँदै १० अर्ब बाँडेर गए सांसदहरु !
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रभावित गर्नेगरी निवर्तमान सांसदले १० अर्ब रुपैयाँ बाँडफाँड गरेका छन् । आफ्नो पदावधि सकिनै लाग्दा अन्तिम समयमा सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पुर्वा...	Read more
डन राजु गोर्खाली राजपाको समानुपातिक सूचीको दोस्रो नम्बरमा
काठमाडौं । गुण्डा नाइके राजु गोर्खाली आगामी प्रतिधिनि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिकको बन्दसूचिमा परेका छन् । मधेसी दल राजपा नेपालले उनको नाम समानुपातिकको बन्द सूचिमा समावेश गरेर निर्वाचन आयोगम...	Read more
समानुपातिक सूचीले एमालेमा लफडा !
काठमाडौं । एमालेले संस्थागत निर्णय नै नगरी प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसद्का उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको छ ।	Read more
शक्ति बढाउँदै कांग्रेस, दश वर्षपछि गच्छदार पार्टी नै लिएर कांग्रेसमा आए
नयाँ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकपनि भाडाकै घरमा बस्ने !